Iindaba - Uyisebenzisa kanjani i-Dent Puller Lifter yokulungisa iiDent
Kuqhelekile ukuba iimoto zitshayiswe kwaye zihambe kwinkqubo yokusetyenziswa. Into yokuqala abanini bemoto abayicingayo kukulungisa ngokwabo. Ngeli xesha, kufuneka balungise ngesandla ngoncedo lokutsala imoto. Isithuthi sokulungisa i-sag asibizi kwaye kulula kakhulu ukusisebenzisa.
Kuyimfuneko ukucoca indawo esele itshonile ngaphambi kokulungiswa kwenxalenye yemoto ethe yatshona, ukuze kuqinisekiswe ukubambelela okungcono kwescucker. Emva koko beka iglu ekhethekileyo kumpu weglu, vula amandla kwaye ulungiselele kwangaphambili malunga nemizuzu emi-5. Kwinkqubo yokutshisa ubushushu, indawo efanelekileyo yekomityi yokufunxa kunye nekomityi yokufunxa inokuthi ikhethwe ngokodidi loxinzelelo. Inkulu indebe yokutsala, kokukhona amandla okutsala akhulu ngakumbi. Ngokubanzi, indawo yokuncamathela kwindebe yokufunxa igwetywa ngokwemilo yoxinzelelo, kwaye indawo yokudakumba ikhethwe ikakhulu kwizikhundla ezininzi zokuncamathela kwindebe. Emva kokuwutshisa umpu weglu, yinxibe ngokulinganayo ikomityi yokutsala ngompu weglu, uyincamathisele ngokukhawuleza kwindawo yokuma, kwaye uyicofe ngobunono ide ilungiswe ikomityi yokufunxa. Emva koko ulungelelanise umngxuma embindini webhulorho yokutsala kunye nekomityi yokutsala, beka i-nut kwintonga yokujija yekomityi yokutsala kwaye uyiqinise. Emva koko jika i-nut ngalo lonke ixesha kwaye uyikhuphe ngamandla amancinci kude kube luxinzelelo. Emva kokulungiswa, susa isixhobo sokutsala, susa ikomityi yokutsala emzimbeni, emva koko ufefe utywala kwiglu yentsalela. Ngeli xesha, unokugweba umphumo wokulungiswa kwamazinyo elangeni!
Oku kungasentla kusetyenziswa indlela yokulungisa i-dent yokulungisa. Ukusetyenziswa kwesilungisi sokulungisa imoto asikwazi kuqinisekisa isiphumo sokulungiswa, kwaye ayizizo zonke iidenari ezinokulungiswa ngesi sixhobo. Ukutsala kulungele kuphela ukulungisa imiphantsi ethambileyo. Ezinye iidenti ezinemilo enkulu okanye engaqhelekanga kufuneka zilungiswe ngezixhobo ze-lever kwiivenkile zokulungisa ezinobungcali. Logama ipeyinti ingawi kwaye ubunzulu be-dent buphakathi kuluhlu olunokulungiswa, inokulungiswa ngaphandle kokupeyinta. Nje ukuba ipeyinti yomzimba yonakaliswe, ungaya kuphela kwivenkile yokulungisa iimoto yokupeyinta iphepha!